Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: fitakian’ny fitiavan-tanindrazana | NewsMada
Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: fitakian’ny fitiavan-tanindrazana
Par Les Nouvelles sur 14/09/2018
Faniriana hanompo tanindrazana no heverina fa maniraka ny mpilatsaka rehetra amina fifidianana, izay fomba ahafahan’ny vahoaka manambara ny safidiny momba izay olona hanankinana anjara andraikitra ao anaty rafitry ny fitantanana. Araka izany dia fahazoana adidy manana ny hasiny no ifaninanana. Ho famintinana izany matetika dia ny fifaninanana mihitsy no voalaza ho masina. Izany fomba fiteny izany angamba dia mety hifono ny fanirin’ny mpifidy ny amin’ny hanomezan’ireo mpifaninana hasina ny fomba hoentiny anaovana ilay fifaninanana. Ahoana tokoa moa no hiheverana fa ho afaka hanome hasina ny andraikitra andrandrainy hiantsorohana izay mampiasa tetika tsy mendrika sy mampiseho fomban-jiolahimboto amin’ny fifaninanana?
Andeha hatao fa ny adidy heverina ho azo no hany manana hasina. Ampy izany handrara ny famadihana ny fifaninanana ho ady. Tsy milaza akory izany fa voatery hifankatia ny mpifaninana. Ny hany takiana aminy dia ny fifanajana. Momba ny hasin’ny adidy, izay hifaninana ny fandresena hahafahana hiantsoroka azy no voalaza. Ivelan’izany anefa dia mbola misy zava-dehibe ambonimbony kokoa raha hasina no resahina, dia ny fitiavan-tanindrazana. Hadinodino anefa izay matetika rehefa tena mafana ny tolona atao.
Tolona eo am-pifaninanana aza dia efa mahatonga ho lavenona ilay afo fanazavana tokony hitaiza fampahatsiahivana ao am-po sy ao an-tsaina ny antony hanaovana ezaka sy ny tanjona efa mipetraka, mainka izany rehefa miseho ireo fakampanahy ateraky ny vola sy voninahitra raha mahazo ilay toerana… Tsy hisy lavenona hokaofinkaofina akory ilay fitiavan-tanindrazana nolazaina ho naniraka, fa lany nitsonika toy ny sira notobasana rano.
Ny mpifidy no mandinika sy manara-maso ny fanajan-tenan’ireo mpifaninana. Tsy izay miseho ho tsy kasihin-dalitra, fa ny olona mahay manaja ny sasany indrindra ireo hafahafa noho izy, no sady manaja ny firaisa-monina sy ny tontolo manodidina, no tena mihaja am-panahy sy amin’ny maha olona azy. Asa raha mbola ilaina averina foana fa mandalo fotoan-tsarotra na ny firenena na ny mponina. Mazava ho azy fa ny filaminana no zava-dehibe ankehitriny. Manana adidy ny tsirairay ka tsy maintsy mifehy tena mba tsy hiverenan’ny korontana izay tsy ho zakan’ny tsena intsony ny fitrangany.
Ao moa ireo mihevitra fa tsy mbola ahafahana hiatrika fifidianana ny zava-misy amin’izao fotoana izao. Raha nanao izay ho afany izy ireo hanemorana ny fifidianana, tapitra izay ny fotoana ahafahana manao izany. Ny tetika maizina hafa dia efa famporisihana ny fitrangan’ny korontana, ka tsy ho azo lazaina intsony ho fitsinjovana ny filaminana noho ny adidy amin’ny firenena.